Annaga Ku saabsan - Shijiazhuang Jipeng Soo dejinta iyo Dhoofinta Co., Ltd.
"Waxaan nahay khabiir ku shaqeeya dhuumaha!
Waxaan nahay shirkad hormuud ka ah dhoofinta iyo dhoofinta oo ay oggolaatay Wasaaradda Dhaqaalaha iyo Ganacsiga Dibadda ee PRChina, waxaana la aasaasey 1998. Shirkadeena waxay ku takhasustay badeecadaha birta iyo macdanta, mashiinnada, alaabada warshadaha iyo alaabada korontada. Waxyaabaha ugu faa'iidada badan iyo kuwa khibradda leh waa dhuumaha iyo waxyaabaha la dhejiyo, sidoo kale qaybo birta lagu tuuro. Qeybtan ganacsi, waxaan goob joog ka nahay oo ka qeybqaadatey taariikhdiisa iyo horumarkiisa bilowgiisii. Illaa iyo hadda, waxaan ku jirnay garoonkan in kabadan 20 sano.
1. Nidaamka tuubbada birta ee birta-birta, qalabka rakibida iyo bir-qabashada birta ee birta ah ee loogu talagalay dhisidda bullaacadda, qashinka iyo qulqulaha sida ay sheegtay EN877, DIN19522, ASTM A888, CISPI301, CASB70, ISO6594.
2. Socket and spigot cast nidaamka tuubbada ciidda birta sida ku xusan BS4622, BS437, BS416, ASTM A74.
3. Tuubboyinka tuubbada birta iyo waxyaabaha ku habboon soo-gaadhsiinta goobta biyaha ISO2531, EN545, EN598.
4. Manhole wuxuu daboolayaa iyo jirdhis ilaa EN124, SS30: 1981, qulqulka, dabaqa iyo saqafka saqafka sare.
5. Waxyaabo kala geddisan iyo gafyo iyo qaybo mishiinno ah iyadoo la raacayo aruurinta macaamiisha ajnabiga ama shay-baarka. Qalabku wuxuu noqon karaa ductile, steel steel carbon and steel.
Alaabooyinkeenu had iyo jeer waxay leeyihiin sumcad wanaagsan suuqyada shisheeye waxayna si balaaran ugu dhoofiyaan Mareykanka, Kanada, wadamada Yurub, Koonfur-bari Aasiya, Ruushka, HK iyo Taiwan iwm Waxaan hubineynaa inaan soo bandhigno alaabo tayo sare leh, waqtigooda gaarsiinta iyo adeeg dhameystiran. Dhamaan macaamiisha gudaha iyo dibaddaba way soo dhaweynayaan shirkadeena iyo warshadeena.
1. Waxaa la asaasay 1998, shirkadeena waxay leedahay taariikh dheer, taas oo soo xaroonteedu ka badan yahay 20million US dollars. Waxaan haysanaa alaabooyin khibrad buuxda u leh si aan ugu adeegno macaamiisheenna shisheeye, maamulaha mashruuca gaarka ah si aan uga wada hadalno faahfaahinta badeecada, aan ula tacaalno dukumiintiyada iyo arrimaha dhoofinta iwm. sawiro ama muunado.
2. Macaamiilku waxay ku raaxeysan karaan keenis badan oo wax ku ool ah oo alaabooyinka halkan la keeno, faa iidooyinkayaga ayaa ah in noocyo kala duwan oo alaab ah ay isugu soo ururiyaan hal weel oo buuxa, macaamiisheena qaar ayaa xitaa u baahan in ka badan 5 nooc oo alaab ah hal mar weel keliya. Taasi waxay u fududaan doontaa macaamiisheena.
3. Xakamaynta tayada ayaa ah adeeg kale oo qiimo leh macaamiishayada. Inta lagu jiro soo-saarista ama ka hor dhoofinta, kormeerahayaga tayada leh wuxuu ku jiri doonaa warshadda si loo dardar-geliyo gaarsiinta loona hubiyo tayada iyo warbixin qoraal ah. Maqaallada aan fiicnayn waa la diidi doonaa ilaa soo-saaraha si loo soo saaro ama loo wanaajiyo tayada ku habboon.